Tsy araka izay lazaina ny atao : ny mpitondra no tokony hiova toe-tsaina aloha | NewsMada
Tsy araka izay lazaina ny atao : ny mpitondra no tokony hiova toe-tsaina aloha
Fanovana toe-tsaina, fomba fanaovana politika… Izany no takina sy andrasan’ny filoha amin’ny mpanao politika. Tsy ny mpitondra ve no tokony hiova toe-tsaina sy hanova ny fomba fanaovana politika aloha?
“Ataovy filamatra ny mifanaja fa tsy mifanebaka, ny mifameno fa tsy mifanavaka, ny mifamelona fa tsy mifamono, ny mifanoro fa tsy mifanilika, ny mifanitsy fa tsy mifamitaka, ny mifanampy fa tsy mifamingana, ny mifanotrona fa tsy mifanitsaka.“
Anisan’ny nambaran’ny filoha Rajaonarimampianina tamin’ny lanonam-pifampiarahabana teny Iavoloha, omaly, io. Azo arenina tsikelikely eo amin’ny andavanandro ny lesoka, ary ho hita fa hirindra ny atao rehetra. Miainga amin’ny fanovana toe-tsaina izany, fifampitaizana ho olom-pirenena vanona, ataon’ny isam-batan’olona sy isan-tokantrano.
“Tandremonareo ao anatin’ny ambaratonga samihafa ato anatin’ny fitondram-panjakana: mba tsy hanao mpamosavy malemy ka manaratsy endrika ny fitondrana sy ny mpitondra“, hoy izy.
Hotohizana ny asa… tsy ahombiazana
Asa be no miandry, asa haingana, tsara, madio, mirindra, fahasahiana manazava amin’ny vahoaka, fahasahiana manapa-kevitra fa ilaina izany. Aoka hifanolo-tanana, hiara-kibanjina ny tena tombontsoam-pirenena. Misokatra ny varavarana ao anatin’ny fihavanam-pirenena entina hampandrosoana ny firenena.
Ekena fa tsy afa-misaraka amin’ny fiainana repoblikanina manamasaka ny demokrasia ny adihevitra politika. Tanjon’izany ny handresy lahatra ny vahoaka ho namana. Hitondrany ny tena eo amin’ny fahefam-pitondrana amin’ny alalan’ny fifidianana, raha resy lahatra ny vahoaka fa ny tolotra avy amin’ny tena no mety mahasoa.
Betsaka no azo atolotra ho an’ny vahoaka, ivelan’ny fanaratsiana, fifaminganana, fanelezana tsaho sy ny lainga marivo tototra, araka ny teniny ho an’ny mpanao politika.
Hafa ny zava-misy sy izay iainana
Mifanaraka amin’izany rehetra izany ve ny zava-misy sy iainana? Manomboka eo amin’ny tena, ny ao an-dapa, ny havana, ny namana… Aleo hitsara ny vahoaka sy ny tantara. Tsy manilika, manavaka, mamono, mamingana, manitsaka, ohatra, ny afitsoky ny mpitondra amin’izay manelingelina rehetra: ny vondrona politika Mapar, ohatra?
Tsy hita mazava koa izay hoe fahasahiana manazava amin’ny vahoaka miaro ny tanindrazana, raha ny “Raharaha Soamahamanina“, ohatra. Iza na inona koa no manaratsy endrika raha tsy ny akaiky ihany? Manginy fotsiny ny raharaha mahabe resaka: kolikoly avo lenta, kiantranoantrano, tsimatimanota…
Tsy izay madio sy izay miova ve no afa-kanadio sy hanova izany rehetra izany?